NSOGBU ỌKỤ: OTU IGBO BỤ IGBO EJIKERELA ỊKPỤGA EEDC ỤLỌIKPE – hoo!haa!!
NSOGBU ỌKỤ: OTU IGBO BỤ IGBO EJIKERELA ỊKPỤGA EEDC ỤLỌIKPE
Otu Igbo Bu Igbo Sociocultural Foundation, adọọla aka na ntị na ha ga akpụpụ ụlọ ọrụ Enugu Electricity Distribution Company (EEDC) ụlọikpe ma ọ bụrụ na ha akwụsịghị atụmatụ iji ígwè ngụ ọkụ ọhụrụ a kpọrọ ‘Smart meter’ were nọchie anya nke ochie bụ ‘stand alone metre’.
Kemgbe abalị mbụ nke ọnwa Jenụwarị afọ 2020, EEDC jụrụ iresị ndị nwere ígwè ngụ ọkụ ochie ọkụ. Nkea tinyeziri ọtụtụ ndị mmadụ na gbagharịa ma butekwa iwe n’ọnụma n’obodo.
N’ozi nke Onyeisi ọchịchị otu ahụ, Dọkịnta Lọọ Mefọ na Odeakwụkwọ Ukwu ha, Mazị Chịdị Omeje tinyere aka, otu a jụrụ ụgwọ ọkụ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ NERC wepụtara, ọ kacha nke metụtara mpaghara Ọwụwa Anyanwụ Ndịda ala anyị, nke ha kọwara ka ihe e mere n’obi ọjọọ, n’akpaghị akpa nakwa n’ụzọ megidere iwu.
Nchọpụta hoo!haa!! mere gosiri na EEDC chịrị ndị agha, anya na-enwu ọkụ were gbaa isi ụlọ ọrụ ha n’Enugwu nakwa ụlọ ọrụ ha ndị ọzọ ogige maka egwu ọhaneze ime ngagharị iwe megide “ajọ atụmatụ” ahụ.
Ihe na-ewute ndị mmadụ bụ na ígwè ngụ ọkụ ochie ahụ ka dị mma mana EEDC chọrọ itinyere mmadụ nile nke ọgbara ọhụrụ a na-atapịa ego ndị mmadụ.
Tupu ndị mmadụ enweta ya bụ ígwè nkụ ọhụrụ na-atapịa ego, ụfọdụ na-akwụ ihe ruru Puku Naira iri ise (N50, 000). N’agbanyeghị nkea, ha ga-anọ n’ọnọdụ ịkwụ ụgwọ ọkụ mmagbunye(estimated Bill), o pekata mpe ọnwa atọ.
Ha kọwakwara orure Gọọmenti Etiti sị na o rere ngalaba ọkụ nke akụnụba ala anyị dịka “orure adigboroja”
Ozi ahụ kwuru sị: “Na iji ngalaba ọkụ were tụnyere ngalaba Nzikọrita ozi, afọ isii ezuola inweta agamnihu pụtara ìhè na inye ọkụ maka akatamkpo ego Gọọmenti mefuworo ebe ahụ”
Ha kwukwara na “O nweghị ihe kpatara ụgwọ ọkụ Mpaghara Ọwụwa Anyanwụ Ndịda ga-eji kara nke ndị ọzọ. Obosara ala mpaghara a pere mpe, ụlọ mmepụta ngwaahịa dị ebe a pekwara mpe iji tụnyere nke dị na Mpaghara Ọdịda Anyanwụ Ndịda ebe ụgwọ ọkụ kazị obere”
Otu a kwuru na NERC na EEDC na-eji aka amagbunye ihe ọbụla sọrọ ha dịka ụgwọ ọkụ maka Mpaghara Ọwụwa Anyanwụ Ndịda n’ụdị na-agbawa isi.
“NERC marakwa na ha akpụọla ùgwù ha n’ala site n’enweghị ike inye ịdọ aka na ntị ma ọ bụ ntaramahụhụ tosiri etosi nye ndị ụlọ ọrụ mmepụta ọkụ (GENCO) nakwa ndị ụlọ ọrụ nkesa ọkụ (DISCO) n’arụrụala ha na-arụsa ụmụ amaala obodo a.”
Otu Igbo bụ Igbo meziri ka o doo anya na ha ejikerela ịkpụga ụlọ ọrụ EEDC nakwa NERC ụlọikpe ma ọ bụrụ na ha esepụghị aka enwe n’ofe
Previous Post: CHAI! FLAVOUR JI ỤBỌ AKWARA EME NNA YA OBI ỤTỌ
Next Post: NKỤTU MGBIDI OGIGE NDỊ NTA AKỤKỌ N’ENUGWU EKEWAALA NDỊ NTA AKỤKỌ ỤZỌ ABỤỌ